Supreme Court Frees 2 MDC Activists Jailed for 'Killing' Zimbabwe Policeman
FILE: Police surround opposition party supporters who had gathered to hear a speech by the country's top opposition leader in Harare, Wednesday, Nov. 20, 2019.
The Supreme Court on Friday ordered the immediate release from Chikurubi Maximum Security Prison of two political prisoners, Last Tamai Maengahama and Tungamirai Madzokere, where they had been detained since 2016 after they were convicted and sentenced to serve 20 years for allegedly murdering a Zimbabwe Republic Police officer.
and Charles Kwaramba of Zimbabwe Lawyers for Human Rights, were each sentenced to serve 20 years at Chikurubi Maximum Security Prison on December 12, 2016, after they were convicted by then High Court Judge Justice Chinembiri Bhunu of murder with actual intent as defined in section 47 of the Criminal Law (Codification and Reform) Act.
The two together with Yvonne Musarurwa were convicted in 2016 for murdering Petros Mutedza, a ZRP Inspector on May 29, 2011. However, Musarurwa was released from prison in March 2018 under a presidential pardon.
According to the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Phenias Nhatarikwa, who was convicted as an accessory after the fact to public violence as defined in section 206 of the Criminal Law (Codification and Reform) Act was fined US$500 or in default of payment, three months imprisonment.
In their application which was opposed by the state, Mtetwa and Kwaramba argued that Justice Bhunu erred and misdirected himself when he failed to properly apply the law and discharge Maengahama, Madzokere, Musarurwa and Nhatarikwa “as he was obliged to at the close of the state case when no evidence justifying their placement on their defence had been led and in doing so denied them a fair trial with the result that the conviction and sentence must be vacated.”
On Friday, Supreme Court Judges Justice of Appeal Rita Makarau, Justice of Appeal Susan Mavangira and Deputy Chief Justice Elizabeth Gwaunza set aside their conviction by Justice Bhunu and acquitted them after ruling that they were not guilty of committing murder.